ALAKAMISY 19 MAY - ALAROBIA 25 MAY 2022
FAMITANA NY KIANJA BAREA : Efa voaloan’ny Fanjakana avokoa ny volan’ny asa vita rehetra
Valo isan-jaton’ny vola nanamboarana ny kianja Barea Mahamasina mitentina 6 178 216, 38 dolara sisa no tsy noefain’ny Fanjakana. 2 décembre 2021
Misy ary efa nomanina hatramin’ny ela ny vola saingy tsy azo omena manontolo raha tsy vita tanteraka ny asa nifanarahana. Tsy afaka hampitombo ny vola omena ny orinasa CSCOD ny Fanjakana na mitaraina ho matiantoka aza izy ireo satria tsenambaro-panjakana no natao. Ireo no fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra manoloana ny resabe niely tao amin’ny tambajotran-tserasera fesiboky.
Tsy hoe tsy voaloa fa tsy naloa mihitsy io vola io, araka ny fanazavana, satria amin’ny asam-panjakana tahaka itony dia ny asa vita ihany no andoavan’ny Fanjakana vola. Tsy mbola vita tanteraka ny famitana ny kianja Barea, raha ny fanazavana, ka izay no tsy mbola nanefana io ampaham-bola io. “Efa vonona ny vola saingy miandry ny fahavitan’ny asa manontolo amin’ny fanaingoana ny kianja (travaux de décoration) sy ny fanatsarana ny endrika ivelany (aménagement extérieur du stade) vao aloa io 8% ambiny amin’ny faktiora io”, hoy ny fanazavana. Nametraka fepetra maromaro amin’ny orinasa nanamboatra ny Kianja ny Fitondram-panjakana. Asa manara-penitra, hoy ny voalaza, no takina. “Amin’ny tsenambaro-panjakana, ny asa ara-kalitao sy ara-dalàna dia ny asa nifanarahana ihany. Izay vita no andoavam-bola kanefa tsy maintsy manadihady sy mijery ny fahavitan’ny asa tsara ny Fanjakana”, hoy hatrany ny fanazavana.
Voalaza tao anatin’ity taratasy nalefan’ny orinasa CSCOD tamin’ ny Fitondram-panjakana ny 01 Novambra lasa teo ity moa fa tsy maintsy hampiatoana ny asa fiambenana ny kianja sy ny fikajiana ny kianja ary ny fandefasana ny Ecran Géant ao Mahamasina izy ireo noho io ambim-bolan’izy ireo mbola tsy voaloa io. Samy tsy nisy avokoa anefa ireo fampiatoana ireo. “Tahaka ny taratasy fitakiana rehetra iny taratasy nalefan’ny orinasa sinoa iny. Sady fampahatsiahivana no fangatahana fanazavana. Efa nifanatona ny roa tonta ary efa samy mahafantatra ny marina amin’izao na ny an-daniny na ny an-kilany”, hoy hatrany Gerard Andriamanohisoa.
Mizara 16 ny asa natao
Marihina fa mizara 16 ny asa natao tamin’ny famitàna ny kianja Barea Mahamasina. Ny 14 tamin’ireo dia efa voaefa avokoa ny vola. Takin’ny Fanjakana amin’ny famitana ity asa ity ny fanaingoana ny Gradin sy ny endrika ivelan’ny Kianja araka izay nifanarahana. Nanteriny fa ao ambanin’ny Gradin dia mbola misy asa maromaro tsy vita kanefa tafiditra ao anatin’ny fifanarahana. Ireto asa tsy vita ireto dia ireo fotodrafitrasa natao hametrahana ny “Kiosk” na toeram-pivarotana ho hita eny amin’ny kianja Barea. Tsiahivina fa hisy trano maromaro azo anaovana tsena lehibe eny amin’ity toerana ity rehefa vita tanteraka ny asa. “Ny fitsinjarana ny toerana avadika ho toeram-pivarotana mihaja ao amin’ny kianja Barea dia mbola tsy vita, tsy mbola vita koa ny fandokoana sy fanaingoana izany. Ao anatin’ny asa iandraiketan’ny CSCOD avokoa ireo. Tsy afaka hamoaka vola am-paosy hafa ivelan’ny nifanarahana ny Fanjakana fa mila hentitra avokoa amin’ny fanaraha-maso rehetra sy amin’ny fanajana ny fifanarahana”, hoy hatrany ny fanazavana.
Isan’ireo raharaha niteraka resabe indray, ny fiandohan’ny herinandro teo ny mikasika ny vola nanamboarana ny kianja Barea Mahamasina. Nisy nanaparitaka tao amin’ny tambajotran-tserasera fesiboky ny taratasy nalefan’ny orinasa CSCOD tany amin’ny Fitondram-panjakana. Taratasy izay mirakitra fangatahana fandoavam-bola mitentina hatrany amin’ny 17 tapitrisa dolara. Io vola io no hita tao anaty taratasy fa tsy mbola voaloan’ny Fanjakana tamin’ny fanamboarana ny kianja Barea Mahamasina. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana dia tsy mitombina ity raharaha ity. Nilaza mazava ny sekretariam-panjakana misahana ny fametrahana ny tanàna vaovao, Gerard Andriamanohisoa, tompon’andraikitra tamin’ity tetikasa ity ny fiandohan’ny herinandro teo fa nisy tokoa io taratasy fangatahana nataon’ny orinasa CSCOD io saingy tsy mitombina velively ny sora-bola voalaza hoe 17 tapitrasa dolara. Notsoriny sy nahitsiny avy hatrany fa ny valo isan-jaton’ny vola, ampahany tamin’ny fanamboarana ny kianja mitentina 6 178 216,38 dolara ihany sisa no vola tsy naloan’ny Fanjakana.
Fifanarahana tsy azo ovaina
Tafiditra ao anatin’ny asa iandraiketan’ny orinasa sinoa koa ny fanatsarana ny Kianja Mitafo ao Mahamasina izay tsy mbola nisy nokitihina amin’izao fotoana. “Tsy arodana akory ny kianja mitafo fa hatsaraina hanaraka ny fenitry ny taotrano mifanaraka amin’ny kianja Barea. Ny vola rehetra hanefana an’ireo dia efa ao avokoa saingy tsy azo efaina raha tsy mifanaraka amin’ny tolotra ny tinady”, hoy hatrany ny fanazavana. Nanamafy koa ny sekreteram-panjakana misahana ny tanàna vaovao fa “na mitaraina ho matiantoka aza ny orinasa CSCOD dia tsy afaka hampitombo ny vola homena azy ireo ny Fanjakana satria izay no efa nifanarahana tany am-boalohany”. “77 tapitrisa ariary no nifanarahana hamitana ny kianja. Na inona na inona fiantraikan’ny Covid, na inona fiakon’izany eo amin’ny famitana ny asa, eny fa na dia niakatra aza ny fitaterana entana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy afaka hanampy izay vola efa nifanarahana intsony ny Fanjakana. Tsenambaro-panjakana io fa tsy fifanarahana eo amin’olon-droa”, hoy harany i Gerard Andriamanohisoa.
ALAKAMISY 19 MAY - ALAROBIA 25 MAY 2022 (0) 24 mai 2022 “Mitaky ny fahatongavan-tsain’ny Solombavambahoaka tsirairay” FANENJEHANA OLONA AMBONY (0) 24 mai 2022